नवयुगीन मोडमा अपेक्षित नेतृत्व
नयाँ सरकार गठनलगत्तै मुलुकले अब राजनीतिक स्थायित्व पाउने मात्र नभई आर्थिक समृद्धिको बाटो पक्रिने विश्वास आमजनजीवनमा पलाएको छ । यद्यपि, सरकार अझै पूर्णताको प्रक्रियामै छ । सरकार यतिखेर संवैधानिक प्रावधानअनुरूप मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाएर केन्द्रीय सरकारको मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या १८ वटा बनाउने गरी त्यसको पुनःसंरचनामा जुटिसकेको छ । प्रदेशहरूको सरकार एवं मन्त्रिमण्डल प्रायःजसो बनिसकेको अवस्थासमेत यतिखेर छ । यसरी हेर्दा मुलुक अब नवयुगीन मोडमा उभिइसकेको मान्न सकिन्छ, मुलुकले अब विगतदेखिको राजनीतिक तथा आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक गरी सबै रूपले सङ्क्रमणकालबाट पार पाइसकेकोले यतिखेर आर्थिक समृद्धिका लागि विकासको मार्गचित्रमा खडा हुँदैछ भन्ने ठाउँ छ । यो नै मुलुकका लागि अत्यन्त खुसीको विषय हो, जुन अवसरको भरपुर उपयोग गर्न भने कुनै पनि तप्काबाट कदापि चुक्नुहुन्न ।
अबको स्थिति भनेको विगतदेखि भन्दै आएझैँ अब सङ्क्रमणकालको परिवेश होइन । अहिले पनि यदाकदा कोही–कोही नेता तथा कार्यकर्ताहरूबाट सङ्क्रमणकालको अंश बाँकी रहेको गन्ध तेर्साइएको वा बालेको पाइन्छ, जुन सत्य होइन । यदि त्यस्तो भन्ने गरिन्छ भने अब त्यो सबै बहानाबाजी भएको मान्न सकिन्छ किनकि अब सङ्क्रमणकालबाट पार पाउँदैछौँ वा सङ्क्रमणकाल छ भन्ने ठाउँ छैन । यसो भन्नुको कारण के हो भने यतिखेर हामी संविधानतः राजनीतिक रूपले र संविधानको पूर्णतः कार्यान्वयनको दृष्टिले समेत पूर्णता पाएको अवस्थामा छौँ । अझै पनि सङ्क्रमणकालको बहानाबाजी गरेर कुनै पनि दल वा नेताले अनेक कुरा गर्नु र आआफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नुु जनतालाई लहलहैमा पारेर झुक्याउन खोज्नु सरह हो । यो कुराको हेक्का अब सबैले राख्नुमा नै बुद्धिमत्ता भएको ठहर्छ किनकि एकआध अपवाद्लाई छोडेर आमनिर्वाचनमा त्यसको लेखाजोखा हुने गरेको छ । आगामी आमचुुनावमा पनि त्यस्तो अवश्य नै हुन्छ ।
यतिखेरसम्म आइपुुग्दा हामीले मुलुकमा नयाँ संविधानबमोजिम सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका छौँ । यो नै यस सन्दर्भमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण पाटो हो । यतिबेला कसले जिते वा कसले हारेभन्दा पनि मूल यात्राको कुरा छ । सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने यस कार्यको पूर्णताले अब प्रभावकारी रूपमै संविधान कार्यान्वयनको अध्याय पूरा भएको छ । र, राज्यसत्तामा नयाँ सरकारले प्रवेश पाएको छ । अब सानातिना असन्तुुष्टि संविधानतः प्रक्रियागत ढङ्गले संशोधनबाटै पूरा हुँदै जाने छन् ।
मधेशवादी दलहरूले उठाएका केही माग तथा असन्तुष्टि संविधान संशोधनमार्फत अब मेटिँदै जाने निश्चित प्रायः छ किनकि ठीक यतिबैलै सरकारमा सहभागी हुन सरकारको नेतृत्व तहबाट मधेशवादी दलहरूलाई आग्रह गरिरहेको अवस्थामा ती दलहरूले माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनका लागि नेतृत्व तयार भए सरकारमा समेत सहभागी हुने जनाउ आइसकेको वा दिइसकेको अवस्था छ । यसका लागि विभिन्न तहमा छलफल भइ समझदारी नजिक पुुगेको छनकसमेत मिल्दै छ । अहिलेका लागि यो अत्यन्त सकारात्मक पहलकदमी भएको मान्न सकिन्छ । यदि त्यसो भयो भने मुलुकमा अब दुुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार बन्ने र यसबाट राजनीतिक स्थायित्वसहित विकास निर्माणले गति लिने शुुभ सङ्केतको रूपमा बुुझ्न सकिन्छ ।
यस परिस्थितिसँगै वर्तमान प्रधानमन्त्री के.पी. ओली यसअघि पनि सरकारको नेतृत्व सम्हाली प्रधानमन्त्री भइसकेका सरकारका अनुुभवी व्यक्तित्वसमेत हुनुहुन्छ । यसो भएकाले पनि उहाँ अब विगतका अनुुभवबाट पाठ सिकेर मुलुक समृद्धिको दिशामा खरो रूपमा उत्रने आँकलन सर्वत्र गरिँदै छ । यदि त्यसो भयो भने मुलुकले चाहेको अग्रगामी परिवर्तनबमोजिम विकास निर्माणका लागि सही एवं प्रभावकारी गोरेटो पक्रिने सुनिश्चित छ । अर्कोतर्फ उहाँमा अब लोभ लालसा रहने ठाउँ पनि छैन । पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री त्यो पनि दुुई–दुुई पटक भइसकेको मान्छेलाई आफ्नो, पराई भनेर विभेद् गर्नु वा लोभलालच राखेर काम गर्न आवश्यक पनि छैन । राजनीतिक रूपले विगतमा हुने गरेका कमीकमजोरीलाई हटाई मुलुकवासीको मुहारमा खुसी आउने गरी काम गरेमा लोकतन्त्रको सार्थकता रहन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई राम्ररी थाहा छ । मात्र, व्यवहारमा उहाँले काम गरेर देखाउन भने खाँचो छ ।
दुःख कष्ट झेल्दै पञ्चायतकालदेखि प्रजातन्त्र एवं लोकतन्त्रका लागि लडेका नेताले आफैँ पर्याप्त बहुमतसहितको सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला त्यस अवसरको भरपुर उपयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास स्वतः गर्न सकिने ठाउँ छ । किनकि यस प्रकारको सकारात्मक राजनीतिक वातावरणमा बिरलै बन्छ, पाइन्छ । त्यसैले सबैले महसुस गर्ने गरी काम गर्ने र गरेर देखाउने अवसर उहाँका लागि यो सुनौलो अवसरसमेत हो । पछिल्लो समय मुलुकमा सही एवं दूरदृष्टि भएको नेता भेटिन नसकेको गुनासो आमवृत्तमा पटक–पटक उठ्ने गरेको छ । पटक–पटक आन्दोलन गरेर वाक्क भएका जनता र बर्बादीमा धेरै समय गुजारेको मुलुकका लागि सही किसिमको राजनीतिक संस्कार दिन सकेमा उहाँको कद्माथि उठ्ने र युगौँसम्म नाम लिनेमध्येमा उहाँ स्वतः पर्न सक्नुहुनेछ, जो सितिमिति यस्तो अवसर जो कोहीलाई मिल्दैन, आउँदैन ।
पछिल्लो समय उहाँले बोलेका केही सकारात्मक कुरा र अहिलेसम्म यो सरकारमा नियुक्त गरेका मन्त्रीहरूको छनोटले उहाँ अर्थात् प्रधानमन्त्री के.पी. ओली त्यस दिशामा खरो रूपमा उत्रिन सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । तर, सरकारमा आगामी दिनमा नियुक्त हुने मन्त्रीको उचित छनोटले त्यसको खाका स्पष्ट हुनेछ । प्रधानमन्त्री एक्लैले मात्र सबै कुराको सकारात्मक तारतम्य नमिल्न सक्छ । यसका लागि समृद्ध सबैले ख्याल गरेर तदनुरूप चल्न एवं जान सक्ने हो भने हाम्रो भविश्य उज्ज्वल रहनेमा कुनै शङ्का छैन । यतिभन्दा भन्दै पनि अन्ततोगत्वा सरकार वा मुुलुकको सकारात्मक कामकारबाहीका लागि मूल मियो भन्ने नै प्रधानमन्त्री हुने हुँदा उहाँमा त्यसखालको नेतृत्व क्षमता र इच्छाशक्ति हुनुु जरुरी छ । यतिखेर उहाँबाट सबै मुलुकवासीले यही अपेक्षा गरेका छन् । त्यसखालको विश्वाससमेत उहाँप्रति आमनागरिकले पालेका छन् ।